सहि श्रोताको अगाडि सही सामग्री प्राप्त गर्दै - तपाईंले सम्भवतः सुन्नुभयो, सामग्री राजा हो र धेरै अझै, विशेष गरी सासको साथ। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई खरीद निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउन धेरै जानकारीको अपेक्षा गर्छन् र तपाईंको ब्रान्डको उच्च स्तरको अधिकारको आशा गर्दछ। सही सामग्रीको विकास गर्ने जसले सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र राख्छ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं जस्तै उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Spyfu र Google Keyword Planner तपाइँको शीर्ष कुञ्जी शव्दहरू के हुन् भनेर निर्धारण गर्न, तपाइँको लक्षित श्रोताले के खोजिरहेको छ। केही रणनीतिहरू समान सामग्रीको रूपमा अर्को ब्ल्गमा अतिथि पोष्टको रूपमा तपाईंको सामग्री साझा गर्दै छन्, जस्तै प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर मध्यम र प्रकाशनहरू, र विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दै र सही दर्शकहरूको अगाडि जान बूस्टिंग।
एक निःशुल्क उपकरण वा स्रोत प्रदान गर्दै - अर्को महान वृद्धि रणनीति भनेको तपाइँको वेबसाइटमा एक नि: शुल्क उपकरण वा संसाधन प्रदान गर्नु हो जुन तपाइँको लक्षित ग्राहकलाई आकर्षित गर्दछ र लगातार तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउँदछ र तपाइँको ब्रान्डलाई केही अधिकार दिन्छ। कोशेड्युलले वास्तवमै एक राम्रो काम गरेको छ सिर्जना गरेर कोस्चेडुल हेडलाइन विश्लेषक यसले तपाइँलाई तिनीहरूको साइटमा सीधा ब्लग पोष्टको लागि हेडलाईन विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। विनिमयमा, तिनीहरूले तपाईंको ईमेलको लागि सोध्छन्। एक हेडलाइन विश्लेषक तिनीहरूको लक्षित दर्शकहरूको लागि सही अर्थ दिन्छ। तपाइँ तपाइँको लक्षित श्रोताले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि यस प्रकारको एक उपकरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँ तिनीहरूको ईमेलको सट्टामा केहि कसरी गर्ने भन्ने बारे गाइड प्रदान गर्न सजिलो केहि गर्न सक्नुहुन्छ।
विज्ञापन अनुकूलन उपकरण - त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं विज्ञापनहरू सिर्जना र प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ एड्रोल प्रयोगकर्ताहरूलाई पुनःअर्गेनेट गर्न जुन तपाईंको साइटमा लामो समय पछि आउँदैछन्। Site ०% भन्दा बढि प्रयोगकर्ताहरू जुन तपाईंको साइटमा आउँछन् उछालमा पुग्न सक्ने सम्भावना फेरि कहिल्यै फिर्ता हुँदैन। एड्रोल तिनीहरूलाई लक्षित गर्दछ विज्ञापनको साथ कहिँ तपाइँको साइटमा उनीहरूको रूचिमा विशेष प्रस्ताव। यदि उनीहरूले प्रीमियम प्याकेजहरू हेरे भने, एड्रोलले उनीहरूलाई एक प्रीमियम छुटको लागि विज्ञापनमा लक्षित गर्दछ र तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउँदछ। विशेष गरी सास जस्तो केहि को लागी, यो एक खरिद संग वास्तव मा जानको लागि केहि अलि बढी निर्णय लिन्छ। तपाईंको प्रयासको एक ठूलो हिस्सा तपाईंको सम्भावित ग्राहकको दिमागको अगाडि रहनेछ र फिर्ता लिन्छ।
एक प्रगति पट्टी र सामाजिक तत्वहरूको साथ तपाईंको onboarding प्रगति सुधार - वृद्धि बनाए रखने को एक विशाल हिस्सा एकै साथ मंथन घटाउने छ जब तपाईं नयाँ प्रयोगकर्ताहरू साईन अप गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई साइन अप गर्दै हुनुहुन्छ तर पहिलो महिनामा ठूलो प्रतिशत खस्दैछ भने, तपाइँ वास्तवमै बढ्दै हुनुहुन्न। यो सास कम्पनीहरूको लागि ठूलो समस्या हो। मंथन रोक्न, निश्चित गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ताहरू सुरुदेखि नै तपाईंको उत्पादनमा राम्रोसँग निपुण छन्। प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको अनबोर्डिंग प्रक्रियाको सबै कार्यवाही चरणहरू पार गर्छन् भनेर निश्चित गर्नका लागि एक उत्तम तरिका र तिनीहरूलाई "पाठहरू" को लागी राख्नुहोस् एक चेकलिस्ट वा प्रगति पट्टी समावेश गर्नु हो। जब प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई देख्छन्, तिनीहरू पूरै प्रक्रियामा जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छन् र महत्वपूर्ण जानकारीलाई वेवास्ता गर्छन्। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, सामाजिक तत्वहरू समावेश गर्नुहोस् जस्तै साथीहरू वा सहयोगीहरू थप्नुहोस्। त्यहाँ जति धेरै सामाजिक सment्लग्नता छ, अधिक प्रयोगकर्ताहरू फर्कने सम्भावना छ र तुरून्तै सुविधाहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ। तपाईंको अनबोर्डिंग प्रक्रिया सुधार गर्ने बारेमा बढि जान्नुहोस्.
अद्यावधिकहरूको साथ नयाँ र फर्कने प्रयोगकर्ताहरूलाई संलग्न गर्नुहोस् - तपाईको टोली तपाईको उत्पादन सुधार गर्न कडा मेहनत गरीरहेको छ तपाईको टोली कडा मेहनत गरीरहेको छ - तपाइँ प्रभावी रूपमा आफ्नो अपडेट र नयाँ सुविधाहरूको घोषणा गरेर प्रयोगकर्ता र सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूलाई लुपमा राख्न चाहनुहुन्छ। यो तपाइँको ब्रान्ड मा विश्वास बनाउँदछ र प्रयोगकर्ता वफादार रहन्छ जब तिनीहरूले तपाइँले उनीहरूले मागेको चीज प्रदान गरेको देख्छन्। प्रयास गर्नुहोस् बीमर तपाईंको साइट वा तपाईंको अनुप्रयोगमा। बीमर एक हो ChangeLog र न्यूजफीड खुल्छ जब प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको नेभिगेसनमा "नयाँ के छ" ट्याब वा तपाइँको अनुप्रयोग इन्टरफेसमा आइकन क्लिक गर्दछ। अपडेटहरूको साइडबार स्ट्रिम पछिल्लोसँग खुल्छ: नयाँ सुविधाहरू, डिलहरू, अपडेटहरू, समाचार, सामग्री, आदि। यो केन्द्रीय स्थान हो जहाँ तपाईं सबैलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पुश सूचनाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको साइट वा अनुप्रयोग बाहिर प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न र तिनीहरूलाई रोमांचक अपडेटको साथ फिर्ता ल्याउन। सगाई बढाउन, मथ्न घटाउने र सम्भावित ग्राहकहरू फर्केर आउने "किनारमा" राख्ने यो उत्तम तरिका हो।
रेफरल मार्केटिंग प्रणाली - तपाईंको हालको प्रयोगकर्ताहरू जस्ता धेरै प्रयोगकर्ताहरूको अगाडि पस्नको लागि एक सजिलो तरीका भनेको तपाईंको हालको प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको ब्रान्डको लागि सिफारिस गर्ने मार्केटिंग कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट प्रयोग गर्नु हो। त्यहाँ उपकरणहरू छन् ReferralCandy यसले तपाइँको उत्पादन र तपाइँको हालको प्रयोगकर्ताहरु र उत्साहीहरु लाई सजिलै तपाइँको रेफरल प्रोग्राम सेट अप गर्न मद्दत गर्दछ तपाइँलाई बेच्न मद्दत गर्दछ जबकि उनीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ। सामाजिक प्रमाण र साथीहरूको समीक्षा शक्तिशाली छन्; तिनीहरूका शब्दहरू तपाईंको भन्दा बढी प्रेरणादायक छन्! तपाईं आफ्नो रेफरलहरू र सम्बन्धित सामग्रीहरू र सामग्रीको साथ तपाईंको उत्पादन बेच्न मद्दत गर्न प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भावनाहरू साँच्चिकै राम्रो हुन्छन् उनीहरूले लक्षित श्रोताको लागि पहिल्यै पहुँच राखेको छ। तिनीहरूले धेरै अधिक प्रामाणिक र वास्तविक तरिकामा तिनीहरूसँग कुराकानी गर्नेछन् त्यसपछि तपाईं विज्ञापनहरू मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ।